गठबन्धन गरेपनि कांग्रेसले माओवादी समाजवादीको चुनाव चिह्नमा भुलेर पनि भोट नहाल्ने, भित्री तयारी बाहिरिएपछि ठूलो तनावमा प्रचण्ड–माधव ! | Prahar News
गठबन्धन गरेपनि कांग्रेसले माओवादी समाजवादीको चुनाव चिह्नमा भुलेर पनि भोट नहाल्ने, भित्री तयारी बाहिरिएपछि ठूलो तनावमा प्रचण्ड–माधव !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा माओवादी केन्द्र झस्किनेगरी अभिव्यक्ती दिएका छन् । थापाले नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्न कुनै दलको सहयोग आवश्यक नपर्ने बताएका हुन् ।
३०–३२ लाख भोट ल्याउने गरेको नेपाली कांग्रेसले अबको निर्वाचनमा ४०–४५ लाख भोट ल्याउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए। कांग्रेसले गठबन्धन गरेपनि रुख बाहेक अरु चिह्नमा भोट नहाल्ने भन्न थालेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन् ।
‘सबै पार्टीहरू टुटफुट भएको अवस्थामा एक जुट भएको कांग्रेस ठीक सन्देश लिएर गयो भने हामी आफ्नै ताकतको आधारमा रूख चिन्हमा पाएको मतको आधारमै पनि एक्लै सरकार पनि बनाउन सक्छौं। त्यो सरकारको आधारमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नि सक्छौं,’ उनले भने। उनले नेतृत्वलाई सबै जिल्लाका कार्यकर्ताले रूख चिन्हमार्फत् नै जिताएर पठाउँछौं भनेर भरोसा दिलाउनुपर्ने बताए।
उनले चितवनमा यसपटक कोही पनि कांग्रेस कार्यकर्ताको रूखबाहेकका चुनाव चिन्हमा भोट गर्नु नपरोस् भन्ने चाहनाको सम्मान गरिने बताए।
‘वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, तिथि, मिति एक दिन पनि तल, माथि हुँदैन,’ जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘आजैबाट तयारीमा लाग्नुस्।’
यस्तै यता प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम सम्झिए । पर्सा पुगेर नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै देउवाले एक्लै चुनाव लड्दाको परिणाम स्मरण गराए । उनले अहिलेको सत्ता साझेदार गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘एक्लै चुनाव लड्दा २०७४ सालको चुनावमा के भयो रु अघिल्लो चुनावको परिणाम पनि सम्झिउँ । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ ।’
बलियो जनाधार र संगठन भएको एमाले प्रतिपक्षमा रहेका बेला एक्लै चुनाव लड्न नहुनेमा उनको जोड थियो । अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीकै सहयोगबाट आफू प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उनले भने, ‘यो गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजानुपर्छ । चुनावपछि पुनः नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
पार्टीभित्रै गठबन्धन गर्न नहुने आवाज उठिरहेका बेला देउवाले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पारेका हुन् । उनी मात्र नभएर काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपाल तरुण दल, तनहुँले दमौलीमा आयोजना गरेको तरुण भेलालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संसद् विघटन गर्ने कार्यको विरोधमा गठबन्धन गरेको स्मरण गराउँदै उनले आगामी निर्वाचनसम्म यसलाई लैजानुपर्नेमा बताए । जुन ठाउँमा कांग्रेस कमजोर छ त्यहाँ गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न हुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले त कांग्रेसलाई हात्ती र गठबन्धनका अन्य दललाई चमेरोको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस हात्ती हो । चमेरोहरू ओत लाग्न खोज्दैछन् । चमेरोले हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन खोज्दै छन् ।’
महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा भने गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने भन्दै उनीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुनेमा उनीहरूको अडान हो ।
चुनावी गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसभित्र तीन ध्रुव देखिएको छ । सभापति देउवासहित केही नेताहरू गठबन्धनसहित चुनावमा नहोमिए समस्या निम्तिने अडानमा छन् । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल गठबन्धनसहित चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने एक्लै चुनाव लड्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।